Fanampian'ny taratasy taratasy: manakarama an-tserasera ny mpanoratra ny mpanoratra ho anao manokana eto Madagascar
Fanampian'ny taratasy taratasy eto Madagasikara hahombiazana haingana indroa!
Mpanoratra akademika mahay sy mpanohana 24/7/365, misy eto Madagasikara ankehitriny! Manome serivisy fanampiana taratasy izahay ary miahy ny fotoananao sy ny fiainanao manokana
Omeo anay ny valinteninao amin'ny serivisy fanoratana taratasy eo alohan'ny hamoronay ho anao
Mila fanampiana ve ianao amin'ny taratasinao? Betsaka ny olona miady amin'ny resaka fanoratana taratasy. Mety hiteraka fihenjanana be izany ary handany fotoana be dia be, ka izany no mahatonga ny olona maro hisoroka izany. Ary na ny fanomezana taratasy misy fe-potoana efa fantatrao aza dia tsy ny asanao tsara indrindra, raha ny vita sy ny famitana ny iray hafa. Tsy mila miahiahy momba azy io ianao izao satria misy serivisy hanampy anao amin'izany.
Olana lehibe eo amin'ireo mpanoratra ny fanakanana mpanoratra. Ny ankamaroan'ny mpanoratra dia manana taratasy farafaharatsiny iray tsy vitany noho ny fahateren'ny fotoana ananany. Izany dia mety hiteraka fahasosorana sy fahasahiranana be na ho an'ny mpanoratra na ho an'ny mpamaky. Ny antony mahazatra indrindra amin'izany dia ny tsy fisian'ny fe-potoana. Ny mpianatra rehetra dia manana fotoana malalaka sasantsasany mandritra ny andro ary ny fe-potoana ho an'ny asa tsirairay dia matetika apetraka amin'ny taom-pianarana.
Ny mpianatry ny anjerimanontolo rehetra dia mila mandefa ny taratasiny mandritra ny faran'ny enim-bolana mba hahazoana ny naotiny. Indraindray ny mpanoratra manadino taratasy na tsy mamaky azy io alohan'ny handefasana azy, izay mahasosotra an'ilay profesora. Ny fomba tsotra indrindra hivoahana amin'ny taratasy dia ny fampiasana serivisy manome fanampiana. Betsaka ny orinasa lehibe any izay manolotra ireto karazana consultant an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ireto izay afaka mamaly ny fanontaniana rehetra momba izay tokony hatao amin'ny taratasy sy izay ilaina mba hiantohana ny vokatra tsara indrindra.
Ny antony lehibe mahatonga izany dia noho ny fisandohana. Ny ankamaroan'ny mpianatra dia hamorona atiny am-boalohany ho an'ny taratasin'izy ireo, saingy tsy manara-maso ny fampiasa piraty alohan'ny handefasana azy. Mety hiteraka olana amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra izany. Matetika ny profesora dia hampahafantatra ny mpianatra momba ny olana plagiarism ary ny mpianatra dia tsy maintsy manoratra lahatsoratra momba ny andalana mba hanaporofoana fa tena izy io fa tsy nalaina tahaka avy amin'ny loharano hafa. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanampiana ny taratasy an-tsoratra manokana ho an'ny mpianatra.
Ny mpianatra dia mila fanampiana fanampiana amin'ny teny manokana ihany koa rehefa miasa amin'ny fanendrena mandritra ny fotoana fohy toy ny taratasy fiasa ho an'ny sanganasa na taratasy ho an'ny tetikasa. Ny olona iray dia tsy afaka manantena ny hanao tsara amin'ny asa ampanaovina azy raha tsy azony ny endrika ampiasain'ny mpanoratra. Mety tsy hahita antsipirihany manan-danja izy ireo ary mety handratra ny naotiny ilay lesoka. Ny fampiasana manam-pahaizana no fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa vita tsara ny zava-drehetra.
Ny ankamaroan'ny mpanoratra dia misafidy ny hividy taratasy amin'ny orinasa an-tserasera satria io no fomba mora indrindra indrindra ahafahan'ny tsirairay mahazo fanampiana amin'ny taratasy. Na izany aza, ny mpianatra sasany dia mahatsapa fa tokony hahazo asa fanompoana manokana izy ireo ary mandroso ary mividy taratasy amin'ny tranokalan'ny mpampianatra. Adihevitra marim-pototra io ary mifototra amin'ny hoe mety ho fantatry ny mpanoratra bebe kokoa amin'ny pejin-tranonkala ny mpampianatra ary ho fantany izay andrasana ao. Raha mila fanampiana sy fanampiana manokana ianao dia tokony hividy ny taratasinao amin'ny tranokalan'ny mpampianatra efa niorina efa elaela izay.
Raha mpampianatra vaovao ianao ary mbola tsy manana fanampiana an-taratasy eny an-tanana, dia tokony holazao aminay ny fomba nahalalanao fampahalalana bebe kokoa momba ilay lohahevitra. Azonao atao ny manome valin-teny anay momba ny lohahevitra izay nokarohinao sy nosoratanao ny teny hoe taratasy. Ilaina tokoa ny valiny satria manome fanazavana bebe kokoa antsika. Raha omenao anay ny antsipirian'ny fifandraisanao aminay, dia afaka manandrana mifandray aminao izahay hametraka fanontaniana bebe kokoa.
Ireo mpianatra dia mety ho lasa tsy voalamina mora foana rehefa vita ny fanendrena azy. Raha mitranga izany dia mila maka fotoana kely izy ireo hanadiovana ny sain'izy ireo. Raha mandamina andraikitra ianao arakaraka ny drafitra, dia tsy mila miahiahy momba ny fandaniana fotoana be loatra ianao hamita ilay fe-potoana taratasy. Amin'izany dia ho vitanao ny mamita ora ara-potoana ara-potoana mba hanana fotoana ampy hankafizanao ny fialan-tsasatry ny fahavaratra.